भगवान शिवलाई खुसी बनाउन गर्नुहोस् यि ५ काम, हुनेछ फलिफाप « Gaunbeshi
प्रकाशित मिति :9August, 2021
काठमाडौ । हिन्दु धर्ममा सोमवारको विशेष महत्व छ । यो दिन भगवान शिवलाई खुसी बनाउन सक्दा मनोकामना पुरा हुने विश्वास लिइन्छ । शिव भगवान निकै छिटो खुसी हुने देवताका रुपमा हिन्दुधर्म ग्रन्थहरुमा ब्याख्या गरिएको छ । सोमबार धेरै नारी पुरुषहरु व्रत बस्छन् । सोमबारको दिन देवताको पनि देवता आरध्यदेव महादेवको पूजा गरिन्छ ।
अविवाहित नारीले सुयोग्य बर तथा विवाहिताले पतिको दीर्घायूको कामनासहित भगवान शिवको पूजा आरधना गर्ने परम्परा छ ।
सोमबारका दिन भगवान शिवप्रति समर्पित भई शिव स्तोत्र, रुद्राक्ष, बेल पत्ताको पूजा गर्नाले भगवान शिव प्रशन्न हुन्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
भगवान शिवप्रति श्रद्धाभाव राख्दै निम्न पाँच काम गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ ।
१। सोमबार भगवान शिवको दिन अर्थाता चन्द्रमा का दिनका रुपमा लिइन्छ। यस दिन विहान सवेरै उठेर भगवान शिवको दर्शन गरी शिव चालीसा या शिवाष्टकको पाठ गर्नाले भगवान शिव प्रसन्न भइ समस्या समाधान हुने विश्वास गरिन्छ ।
२। दाम्पत्य जीवनमा आउने उतार चढाव वा समस्या समाधानको लागि सोमबारको विहान सबेरै गौरी–शंकरलाई मनन गरी रुद्राक्ष शिव भगवानलाई अर्पर्ण गर्नाले मनले चिताएको पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ ।
३। बिहानै बेलपत्रमा सेतो चन्दनको टीका बनाएर शिवलिंगको पूजा गर्नाले पनि फलिफाप हुन्छ ।
४। सोमबारका दिन आफ्नो पायक पर्ने शिव मन्दिरमा पुगेर शिवलिंगमा दूध चढाउनुपर्छ । उक्त दूध तामाको भाडामा ल्याएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेको ठाउँमा पूर्ण श्रद्धाका साथ छर्किदै ‘ॐ नमः शिवायः’ मन्त्रको जप गर्नाले व्यवसायमा श्रीवृद्धि हुने मान्यता राखिन्छ ।
५। ‘ॐ नमो धनदाय स्वाहा’ मन्त्र कुनै शिव मन्दिरमा गएर रुद्राक्षको मालाले ११ पटक जप गर्नुहस् । यस मन्त्रको जप गर्नाले धन लाभ हुने धार्मिक विश्वास छ ।
बुधबार कुन भगवानको पूजा गर्ने ? विथाल देवको यसरी पूजा गर्दा यस्तो हुनेछ लाभ
अन्य बारमा जस्तो बुधबार कुन भगवानको पूजा हुन्छ भनेर धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । तर
काठमाडौं । हिन्दु धर्ममा हरेक बारको आफ्नै महत्व हुन्छ । हरेक वारमा कुनै न कुनै
आज कुशे औंशी र बुवाको मुख हेर्ने दिन ! के छ यो दिनको महत्व ?
भदौ महिनामा पर्ने औँसीलाई कुशे औँसी भनिन्छ । प्रत्येक वर्ष भाद्रकृष्ण औँसीका दिन मनाइने कुशे
काठमाडौ । हिन्दु धर्ममा सोमवारको विशेष महत्व छ । यो दिन भगवान शिवलाई खुसी